जानकारी – Ram Kumar Pariyar
Current Page: जानकारी
२०७२ माघ ११
जागिरका लागि एकदमै महत्वपूर्ण कागजात मध्येमा बायोडाटा पर्छ । तर यहि महत्वपुर्ण डकुमेन्टमा हामी कयौं यस्ता गल्तीहरु छोडिदिन्छौं जसले गर्दा जागिर मिल्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । हेर्नमा खासै ठुलो गल्ति नभएपनि यस्ता गल्तिहरुको असर भने ठुलो हुन्छ । त्यसैले बायोडाटा कहिँ पेश गर्नुभन्दा पहिला...
२०७२ मंसिर २
मोबाईलबाट डिलेट भएको फोटोहरु रिकभर गर्न यसो गर्नुस
हाम्रो फोनमा सेभ भएका फोटाहरु अनजानमा डिलीट हुर्ने गर्छन्। कहिलेकाँहि फोनमा भाइरसका कारण पनि फोटोहरुलाई डिलीट गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। आफ्ना रमाइला क्षणका फोटाहरु डिलीट नगर्न परे हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर यसरी डिलीट भएका फोटोहरु रिकभर गर्न सक्ने केही उपायहरु छन्। यसका लागि...
२०७२ आश्विन ४
दलितका लागि के के छ नयाँ संविधानमा
१. प्रस्तावनामै सबैप्रकारका जातिय छुवाछूत अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख । २. भाग ३ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हक गरि छुट्टाछुट्टै मौलिक हकको व्यवस्था । ३. निजि तथा सार्वजनिक कुनैपनी स्थानमा कुनै किसिमको छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाईने गरिएको खण्डमा गम्भीर...
२०७२ भाद्र ७
काठमान्डौ । नाकभित्र पसेका सुक्ष्म कणलाई बाहिर फ्याँक्न गरिने प्रतिक्रिया हो हाछ्युँ । हाछ्युँ आएपछि बोलिने शब्द देशअनुसार फरक हुन्छ । नेपालमा सरी, एक्स्क्युज मी (माफ गर्नुहोस्) भनिन्छ भने भारतमा ‘जियो’ या ‘राम’ भनिन्छ । अंग्रेजहरु ‘ब्लेस यु’ या ‘गड’ भन्छन् भने ग्रीक या...
२०७२ भाद्र ४
विदेशबाट के कस्तो सामान लैजाँदा कति कर लाग्छ ?
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने हरेक नेपाली केही न केही सामान लिएर नै फर्कन्छन । विशेषत: ईलेक्ट्रोनिक सामानहरु त्यसमा पनि टेलिभिजन , होम थिएटर , ल्यापटप , टर्चलाईट जस्ता सामान लैजान त अनिवार्य जस्तै भएको छ । यी मध्ये पनि टेलिभिजन र सुन अधिकांसले लगेकै हुन्छन्...
२०७२ असार २२
रेस्लिङ खेलको वास्तविकता के हो ?
तपाईं डब्लुडब्लुई रेस्लिङ कत्तिको हेर्नुहुन्छ ? अहिले विशेषत: बालबालिका र किशोरकिशोरी रेस्लिङमा बढी झुम्मिने गर्छन् । प्रख्यात रेस्लिङ खेलाडीहरुको नाम उनिहरुलाई कन्ठस्थ हुन्छ । रेस्लिङ खेल भित्रका खतरनाक युद्ध हेरेर धेरै अचम्मित पनि हुन्छन् । धेरैले खेलमा देखाईने युद्ध लाई वास्तविक भन्ने ठानेका हुन्छन्...
२०७२ असार १८
मोबाईल चलाउनेहरुले ध्यान दिनै पर्ने कुराहरु !!!
२१ औं शताब्दीको एउटा महत्त्वपूर्ण उत्पादन मोबाईल फोन पनि हो । अहिले त्यस्तो व्यक्ती सायदै भेटिएला जसले मोबाईल नबोकेको होस । व्यवसायी , पत्रकार , उद्योगपति , नेता देखि विद्यार्थी हरेकको हात हातमा मोबाईल हुन्छ र जरुरी पनि भएको छ । पछिल्लो समय कृषक...
२०७२ बैशाख २९
होशियार : भुकम्पको बेला नगर्नुहोस यी गल्ती !!!
भूकम्प कति भयानक हुन सक्छ भन्ने कुरा वैशाख १२ गते शनिबार मध्यान्नमा गएको भुकम्पबाट हामी सबैले अनुभुत गरेका छौं । खासगरी मुख्य भूकम्पपछि त्यसपछि आउने (Aftershock) अर्थात पराकम्पनले समेत मानसिक तनाव र क्षति गर्ने कुरा पनि देखि सकियो । यहाँ भुकम्पको समयमा गर्न नहुने...
२०७२ बैशाख ४
के के खाँदा हुन्छ “फुड पोईजन” ?
स्वस्थ र सन्तुलित खानपान र नियमित व्यायाम हाम्रो शरीरका लागि अपरिहार्य कृयाकपाप हुन । यिनको तालमेल नमिले हाम्रो निम्ति निकै घातक असर समेत पर्न सक्छ । अझ खानपिनमा विशेष सावधानी नअपनाउने हो भने त रोगले च्याप्ने मात्रै होईन क्षणभरमै ज्यानै जान पनि सक्छ ।...